I-Bintangor Plywood, i-Commerce Plywood, iPlywood ekhonkolo ukwakhiwa - i-Edlon
I-Edlon Wood Products Co, Ltd eyasungulwa ngonyaka we-2003, esenkabeni ye-HuaiHai zone yezomnotho, igcwele izinsiza zezinkuni nabasebenzi abanamakhono. Sihlala sigxila kuzixazululo zezinkuni zokwakha ezifayilisiwe nokwenziwa kwefenisha, Imikhiqizo yethu eyinhloko iqukethe i-COMMERCIAL PLYWOOD, FILM FACED PLYWOOD, DOORSKIN PLYWOOD ne-HPL PLYWOOD, izinhlobo eziningi zebhodi lamanoni kufaka phakathi i-PETG, i-ACYLIC, i-PVC, neMELAMINE …… Ukusetshenziswa okusimeme kwemithombo yezinkuni ngekhwalithi kuqala, sihlala sakha igama elihle nehlanzekile i-EDLONWOOD, lokho kuqinisekisa imigomo yebhizinisi ethembekile nephakeme ngawo wonke amakhasimende ethu abalulekile.
Iphaneli yeLaminate ukucutshungulwa kwesibili ngesisekelo se-plywood, ukumboza ingaphezulu layo ngesendlalelo sezinye izinto zokuhlangabezana nezinhloso ezahlukahlukene zokusebenzisa. Njengamanje, singanikeza ngezinto ezifana ne-HPL, PVC, PETG, acrylic, Melamine, UV, njll. Kungasetshenziswa efenisha ephezulu, ekhabethe, egumbini lokugezela, njll.
I-Door plywood isho nge-plywood yesayizi ekhethekile esetshenziselwa ukwenza amaphaneli emnyango. Singanikeza imikhiqizo enemibala ehlukahlukene, izitayela namaphethini ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Ngokufanayo, sithuthukisa ngenkuthalo zonke izinhlobo zemikhiqizo emisha, futhi ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo engcono kakhulu inhloso yethu.
Ifenisha yefenisha yiyona plywood ejwayelekile kakhulu, evame ukusetshenziselwa ukwenza ifenisha, njenge-wardrobe, i-bookmark, njll. Inamandla amahle futhi ithambile, futhi kukhona umkhiqizo okhethekile, i-LVL, izinto ezisetshenziselwa ukwenza umbhede.
I-Xuzhou Edlon Wood Products Co, Ltd.
Ucingo: 0086- (0) 516-66688198
Amathegi - Imikhiqizo Hot - Sitemap
Umehluko phakathi kwe-plywood ne-bl ...
Ukukhetha ifenisha, okokuqala ...
Hlanganisa unamathisela izici zephaneli
Ukusetshenziswa okuyinhloko kweplywood